Pardus Linux 17, iyo kugovera kweTurkey kwatove neKutambanudza | Linux Vakapindwa muropa
Kugoverwa kwakawanda kwakavakirwa paDebian, kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma kuDebian Stretch, kutora vhezheni nyowani yaamai distro sehwaro hwekuenderera nemapurojekiti avo. Kugovera uko kwakagadziriswa nguva pfupi yadarika hakuzivikanwe zvakanyanya kune vazhinji, asi iko iko kutove kushambadzira kwevekare. Iyi vhezheni itsva inonzi Pardus Linux 17. Vhezheni yePardus Linux kugovera uye iyo ichiri yakasungirirwa kuTurkey.
Pardus Linux 17 inguva nyowani iyo yakavakirwa paDebian Stretch, iyo itsva vhezheni yeDebian. Asi zvakare, iyo vhezheni nyowani inouya nezvakawanda zvakagadziridzwa zvirongwa.Pardus Linux kugovera uko kwakazvarwa kwakavakirwa paGentoo asi izvo zvakakurumidza kuve kuzvimiririra kuve kugovera kumwe chete. Asi mushure mekusiya TUBITAK / UEKAE sechikamu chechikwata chekuvandudza, kugovera kwakapedzisira kwavimba naDebian kuti irambe ichigadzirisa. Iyo nyowani vhezheni yePardus Linux yakavakirwa paDebian Stretch, Linux kernel iri 4.9 uye ine zvirongwa zvinotevera: LibreOffice 5.2.7, Mozilla Firefox 52.2, Mozilla Thunderbird 45.8, VLC 2.2.6 kana OpenJDK 8, pakati pevamwe.
Pardus Linux 17 inotevera uchishandisa XFCE seyakagadzika desktop, iro rakareruka desktop rinoita, pakati pezvimwe zvinhu, kuti iko kugovera kunoda mashoma masosi ekushandisa. Asi XFCE haisi iyo inonyanya kufadza ficha. Pardus Linux 17 inouya ne PXE inogoneswa mune yako yekuisa, iri basa rinoreva kuti isu tinogona kuita yekumisikidza kure pamwe chete pamakomputa akati wandei. Chinhu chakanakira network dzemakomputa kana kungoitira mabhizimusi madiki anoda kuve nemakomputa akawanda.
Pardus Linux 17 kugoverwa kwemahara kwatinogona kupfuura nako yayo yepamutemo webhusaiti. Kana isu tatova nekugovera uku ne rairo rakareruka re «dist-kusimudzira» kana neako software manejimendi ekushandisa isu tichawana iyo nyowani vhezheni yekugovera iyi. Kunyange chiri chokwadi kuti Pardus Linux haisisiri kugovera kwayaimbove; kana chiri chokwadi kuti chirongwa chakadzikama uye sarudzo yakanaka kana tichida kuve nehurongwa hwekushandisa hunoshandisa zviwanikwa zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Pardus Linux 17, kugoverwa kweTurkey kwatove neKutambanudza